Xayiraadda Trump ma saameyn doontaa dagaalka ka dhanka ah Daacish? | shumis.net
Home » News » Xayiraadda Trump ma saameyn doontaa dagaalka ka dhanka ah Daacish?
Xayiraadda Trump ma saameyn doontaa dagaalka ka dhanka ah Daacish?
Haddii si loo eego, jawaabtu waa haa.
Ma jiro qaab dhanka seyniska ah oo casriyeysan oo rasmiyan lagu qiyaasi karo tirada dhabta ah ee dadka ka xanaaqi doono amarka madaxweyne Trump ee ku aadan muhaajiriinta toddobo waddan oo muslimiin ah, arrintaa oo laga yaabo in ay geliso dareen ah in lagu khasbay in ay weerar ku qaadaan Mareykanka iyo bartilmaameedyo kale oo reer galbeedka ah.
Waxaana dhici karta in dad noocaasi ay jiraan ama aysanba jirin hadda.
Sidoo kale, ma jiro qaab casriyaysan oo lagu xaqiijin karo tirada shakhsiyaadka mayalka adag ee hadda laga hortagay in ay galaan Mareykanka sababo la xiriira amarka madaxweyne Trump.
Balse arrinta dhabta ah ayaa ah in ay arrintani u danaynayso kooxda la baxday Dowladda Islaamka marka la eego dagaalka mabda'a ku dhisan ee mar waliba is badalaya isla markaana u baahan in la kasbado maskaxda iyo quluubta shacabka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran, Javad Zarif, oo dalkiisa uu haatan gacan ka siinayo dowladda Ciraaq dagaalka ka dhanka ah kooxdani ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani uu qaaday Mareykanka ay taariikhda gali doonto oo ay noqon doonto haddiyaddii ugu weynayd ee la siiyo kooxaha xagjirka ah iyo taageerayaashooda.
Waxa uu intaasi ku daray in tallaabadan ay horseedayso in argagixisadu ay ciidan badan hesho, iyada oo arrintaa ay sii fogeyn doonto cadaawadda ay xagjiriintu in muddo ahba ka faa'iideysanayeen.
Dalka Induniisiya, oo ah waddanka ugu Muslimiinta badan caalamka oo dhan ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay go'aankaasi, sababtoo ah buu yiri, waxa uu saameyn ku yeelan doonaa dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah argagixisada, ayna khalad tahay in aragtida kooxaha xagjirka ah iyo argagixisaduba lala xiriiriyo diin gaar ah.
Xitaa dalka Britain oo ay Mareykanku aad xulufo u yihiin ayaa go'aanka madaxweyne Trump aad u dhaliilay. Wasiirka arrimaha dibadda Britain, Boris Johnson, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in shakhsiyan uu tallaabadaasi u arko mid dadka kala qaybinayso isla markaana khalad ah.
Dhanka kale, dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada oo inta badan laga wado baraha intarneedka iyo shacabka oo laamaha amniga aad ula shaqeeya ayaa waxaa soo gaari doono dhaawac maadaama tallaabadani dowladda Mareykanka ay ugu yaraan keeni doonto in uu hakad ku yimaado wada shaqeynta dowladda Mareykanka iyo waddamada ay u baahan tahay in ay gacan ka siiyaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
Dowladda Ciraaq oo Mareykanka uu gacan weyn ka gaystay tababaridda ciidamadeeda ayaa isla markiiba waxa ay billowday in ay qaado tallaabooyin aargoosi ah oo ay waddankeeda uga mamnuuceyso muwaadiniinta Mareykanka.
Gudaha waddamada bariga dhexe, xaqaa'iqa jira ayaa ah in mar kastaa oo ay soo baxdo arrin Mareykanka ka dhigaysa mid ka dhan ah Islaamka, waxaa adkaanayo in lala dagaallamo aragtida kooxda la baxday Dowlada Islaamka iyo kooxaha kale ee xagjiriinta ah.
Xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in markii horeba kooxaha inta badan dhaliyay ficillada sababay kala shakiga iyo in fikir khaldan laga qaato Muslimiinta aysan ahayn kuwo matalayo Muslimiinta oo dhan.
Waxaana iska cad in kooxaha sida Al-Qaacidda, dowladda Islaamka, Al-Shabab iyo sidoo kale kooxaha xiriirka la leh ay yihiin kuwa ku dhaqaaqay jihaad, iyaga oo adeegsanaya magaca Islaamka oo dhan.
Kooxahani ayaa waxa ay doonayaan in ay kala qaybiyaan Muslimiinta iyo dadyowga kale ee aan Muslimka ahayn.
Waxa ay sidoo kale danaynayaan in ay soo celiyaan xilli caalamka uu u kala qaybsanaan jiray dhul uu Islaamku ka taliyo oo shareecada lagu xukumo iyo dhul lagu dagaallamo oo ay colaadi ka jirto, kaa oo ah dhammaan dhulka uusan Islaamka ka talinin.
Fikrad kastaa oo caalamka shaki sii kala gelinayso ayaa ah mid ay kooxahani soo dhaweynayaan.
Hoggaanka kooxda Dowladda Islaamka ayaa ka carooday qaxootiga reer Suuriya ee u qaxay Yurub, waxa ayna ku tilmaameen khiyaano iyagoo doonayay inay u qaxaan xaruntooda Raqa. Sidaas darteed, waxaa hadda dhici karta in arrintu ay u dhacdo sida ay doonayaan kooxdani oo ay ka faa'iideystaan amarka madaxweyne Trump.
In kastoo uu aad u sii yaraanayo dhulka ay kooxdani xukunto ee ku yaalla bariga dhexe, haddana waxaa suurtagal ah in ay ka faa'iideysato tallaabadan Trump oo ay hesho ciidan badan isla amrkaana ay ku dhiiri geliso taageerayaasheeda in ay qaadaan dagaallo hor leh, iyadoo ayba suurtagal tahay in qaar ka mid ah taageerayaasha kooxdani ay ku nool yihiin gudaha Mareykanka.
Title: Xayiraadda Trump ma saameyn doontaa dagaalka ka dhanka ah Daacish?
Posted by Unknown, Published at February 02, 2017 and have 0 comments